Faallooyinka laga bixiyey go'aanka Iswiidhen ee ictiraafka Falstiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madax-waynaha Falstiin Maxamuud Cabbaas oo soo dhoweeyay go'aanka dawladda Iswiidhen. Sawirle: TT
Faallooyinka laga bixiyey go'aanka Iswiidhen ee ictiraafka Falstiin
La daabacay torsdag 30 oktober 2014 kl 15.24
Faallooyinka laga soo saareyo go'aankii dawladda Sweden ku aqoonsatay dalka Falastiin ayaan noqon kuwo la sugo. Ugu horreeyn xisbiyada mucaaradka ee dalka ayaa dhaleeceeyntoodii halkii ka wada, halka dhanka kale ey ka kala imaneyaan ammaan iyo dhaleeceeyn waddammada Israa'iil iyo Falastiin.
Wasiirka arrimmaha dibadda ee Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa ku magacaabay go'aanka tallaabada ay dawladda Sweden ku aqoonsata Falastiin mid laga xumaado, isagoona ula jeeday inay tallaabadaasi xoojineeyso ururrada xag-jirka ee bulshada Falastiin.
- Dawladda Sweden waa inay fahanto in xaaladda Bariga Dhexe tahay mid ka qalaf-san in la isku xirxiro alaabo laga soo iibsaday dukaanka alaabada guryaha ee Ikea iyo in dalka Sweden uu masuuliyad muujiyo iyo xil-kasnimo, sida uu sheegay Avigdor Lieberman oo u warramayay shirkadda wararka ee loo soo gaabiyo AFP.
Dhanka kale ayaa sidii la filayey ay ka soo yeertay faallo ka duwan madax-waynaha Falastiin, Maxamuud Cabbaas. Isagoona ku magacaabay go'aanka ay gaadhay dawladda Sweden "mid geesi-nimo oo taariikhi ah".
Dhammaan waddammada weli ka shaki-san inay ictiraafaan dalka Falastiin oo ku dhisan xadka heshiiskii caalamiga ee Qarammada Midoobey ee sannadkii 1967 oo caasimad u tahay bariga Jerusalaan waa iney muujiyaan ku dayasho dalka Sweden, sida uu sheegay mar uu u warramayay shirkadda wararka ee AFP.
Waxey sidoo kale faallooyin farxad leh ka soo yeereen dhanka dalka Israa'iil. Madaxii hore ee arrimmaha dibadda Israa'iil, Alon Liel, ayaa soo dhoweeyay ictiraafka dalka Falastiin.
- Waan ku farax-sanahay in dalka Sweden uu dhabba-tus u noqdo amuurtan. Qaaradda Yurub waa qaaradda keliya ee xal u keeni karta abuurista laba dawladood oo xor ah. Xoog ku heeysashada dalka Israa'iil ee qaybo ka mid ah Falastiin ayaa ah fal aan caddaalad ku dhisnayn, waana mid halis ku ah dawladda Israa'iil.
Xisbiyada mucaaradka Sweden ayaa sidoodii uga soo hor-jeeda go'aanka ay dawladdu ku aqoonsatay jiritaanka Falastiin. Xisbiga Dhexe - Centerpartiet ayaa qaba in xitaa haddii ay tallaabadani tahay midka uu xalku ku jiro, ay haddana dawladdu ku khaldanayd habkii ay u raacday.
- Waa dhab inuu waafaq-san yahay xeerka caalamiga ah ee xuquuqda Falastiin hase yeeshee qaabka loo maray habka ictiraafka ayaan ahayn kii dhabta ahaa ee loo baahnaa, sida ay sheegtay Kerstin Lundgren, af-hayeenka siyaasadda arrimmaha dibadda ee xisbiga.
Hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Göran Hägglund ayaan ka soo hor-jeedin oo keliya go'aanka ictiraafka, hase yeeshee sidoo kale diiddan dhabbada loo marey iyadoo aan laga talo gelin xisbiyada.
- Kolka laga hadleyo dalka Falastiin ma ahan mid la oran karo in gacanta lagu wada hayo dhulka Falastiin. Waxaa halkaa ka baxay mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiim-san ee dal lagu aqoonsado. Marka middaa laga yimaado ayay dawladdu markiiba ku dhawaaqday sida xal loogu heli karo in dawlad la ictiraafo iyo sidoo kale in laga tala-geliyo xisbiyada iyo baarlamanka, sida uu sheegay Göran Hägglund.
Sweden oo noqotay dalkii EU ugu horeeyay oo ictiraafa Falastiin
Löfven: Way naga go'an tahay inaan Falastiin Ictiraafno
Aqoonsiga Falastiinn oo dood dhaliyay